GoPro, oo ah kii sameeyey camera tallaabo, ayaa u haayay ay kala duwan oo idil inay ka mid ah wixii intaa feature ee Hero 3 Edition 4k-awood ah. Version cusub ee loogu magac daray GoPro HERO3 ayaa lagu tilmaamay in ay ka yar 30%, 25% badan lagu shido iyo 2 jeer ka xoog badan marka loo eego daydo hore. Intaa waxaa dheer, tusaalahan waxa weeye caddayn biyaha iyo wuxuu noqon karaa mid marsho dhajinta. Sidoo kale waa wearable. Intaa waxaa dheer, tan isku camera-fiidiyo qabsan karaan tirada aalladda-balaadhan oo ah 1440p iyo 48fps, 1080p iyo 60 fps iyo sidoo kale 720p iyo 120 fps videos. Awoodda ay sawir waa 12MP heerka layaab leh 30 photos labaad kasta. Oo haddii tani weli ma waa mid cajiib ah, camera waa sidoo kale, Wi-Fi karti.
GoPro HERO3 uu leeyahay ee la soo dhaafay dhawaan boogaga hore ay ku dhawaaqday in camera cusub ma ahayn oo keliya awood keliya 2.7K laakiin halkii 4K la yaab leh. Tani hab 4K waa mid aad waxtar u leh sida hoos-kumbyuutarradeedu u mooshin degdeg ah. Si kastaba ha ahaatee, dadka isticmaala badan ayaa laga yaabaa in la kulmeen dhibaatooyin ee isku dayaya in ay ku shuban 4K MP4 (H.264) ka dambeeyay GoPro ee ujeedooyinka tafatirka. Sida xaqiiqadu, dad badan galin helay 4K video adag tahay in la soo dhoofsadaan galay tifaftirayaasha badan oo ah ujeedooyinka tafatirka.
Waa maxay sababta ay taasi dhacdo waa wax dad badan oo weli ku jira si ay u fahmaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaan si kooban u sharxi doona ka hor inta Socota si ay u bixiyaan talaabo ah oo ay ku qoran xeerka tallaabo ku saabsan sida loo edit GoPro 4K video. Tifaftirayaasha sabab badan oo aan u ogolaan dhoofinta 4K video for tafatirka waa in aanay taageeri 4K qaab file video u dejinta waqtiga-line tafatirka software u janjeedha video. Sidaas darteed, u dejinta hooyo ee 4K video, waxa ay, waxaa wanaagsan in marka hore la badalo GoPro qaab video in PC ama Mac la codec haboon codsiga tafatirka.
Su'aasha markaa waa, "taas oo codsi caawin kara aalada u tafatirka ee GoPro 4K video on PC aan marka hore haya'ad." Xaaladan oo kale, ee converters sare waa Pavtube Video Converter Ultimate ama iMedia Converter in ay awoodaan in ay transcode cajalado GoPro 4K in qaab ku habboon codsiyada tafatirka caadiga ah sida Sony Vegas, AVID, Cyberlink, Windows Movie Kan sameeyey, Pinnacle, jilitaankii marka la isticmaalayo daaqadaha iyo iMovie, FCP X,, AVID, iyo Final Goo Express marka la isticmaalayo Mac.
Si loo badalo GoPro 4K videos on PC / Mac ujeedooyin ee tafatirka, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad raacdid talaabooyinkan soo socda.
Tallaabo 1: Ku rakib GoPro Hero 3 Converter u Win / Mac
Tallaabada ugu horreysa waxay noqon doontaa si loo soo dajiyo GoPro Hero 3 Converter u Win / Mac. Caqli ahaan, waxba ma la samayn karaa iyada oo aan software ah. Nuqul ka mid ah software ah waxaa laga heli karaa internetka.
Talaabada 2: shuban foomka Go laga heli files Pro 4K Tag camera Pro gal Converter ah
Tani waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la isticmaalayo mid ka mid Raadiso icon faylka meel file ama si fudud toos ah faylka jiidayeen barnaamijka. Waxaa muhiim ah in la ogaado in files badan lagu dari karaa oo ku qoran si aad codsiga u diyaar ah in la qaado tallaabo. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo la jiiday adakaanayso in ay meesha iyo xulashada dhammaan faylasha lala beegsaday by haysta button gacanta ku soo dejiyey.
Talaabada 3: xulashada qaabka wax soo saarka ku haboon
Waxaa jira sanduuqa qaab la dhibic hoos menu. Wixii Mac isticmaala in isticmaalayso Final Cut Pro tusaale ahaan, waxay dooran karaan Apple Pro Qaraarka 422 (* .mov) "loogu tafatirka isticmaalaya FCP 6/7 / X. Hoos ka eeg,
Haddii tafatirka ee iMovie dooro Apple Inter-dhexdhexaadiyaan codec (AIC) (* .mov) halka in AVID MC, waxaa lagu talinayaa in dadka isticmaala ay doortaan DNxHD AVID (* .mov) Dhinaca kale, dadka isticmaala daaqadaha waa in ay doortaan AVI / wmv / MPEG -2 sida qaab doorbiday saarka ah ee tafatirka waa Sony Vegas, Pinnacle, Ciyaar, AVID, Cyber-link ama Windows Movie abuuray.
Talaabada 4: Dooro goobaha la doonayo
Isticmaalka calanka u dejinta, waxaa lagu talinayaa in ay doortaan xalka la doonayo wax soo saarka iyo bitrates. Sida xaqiiqadu, icon goobaha saamaxaya kuwa isticmaala inay doortaan goobaha jeclaystay file wax soo saarka.
Talaabada 5: Transcode GoPro 4K videos in qaab tafatirka socon
Marka goobaha la sameeyo, ka videos 4K ayaa diyaar u ah in la beddelay qaab ku habboon tafatirka. Sidaas daraaddeed soo socda waa in la riix "badalo" icon si ay u bilaabaan transcoding Pro 4K Go ah video inay qaab saaxiibtinimo tafatirka. Waxaa muhiim ah in la ogaado ruuxaan Converter in transcode ka GoPro 4K qaabab file video qaababka in la saxar karo by software kale tafatirka. Software ogolaan doonaa audio kaamil ah iyo video .Wadashaqayntaas.
Haddii aad u malaynayso in this waxaa aad u adkayn idiin, waxaad isku dayi kartaa Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor), kaas oo edit karaa GoPro 4K video files leh qalabka tafatirka fududahay in la isticmaalo, laakiin xoog badan. Download version maxkamad free hoos ku qoran.
> Resource > Video > Sida loo Edit GoPro 4K Video